क्रिस्टियानो रोनाल्डो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू क्रिस्टियानो रोनाल्डो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, विगतको प्रेमिका, पार्टनर, जीवनशैली, नेट मूल्य र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा हामी पोर्तुगाली फुटबल कथाको जीवनमा महत्वपूर्ण घटनाहरू टुक्र्याउँदछौं। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिनहरु बाट शुरू हुन्छ जब उनी प्रख्यात भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकाल हेर्नुहोस् - क्रिस्टियानो रोनाल्डोको बायोको स्पष्ट चित्रण।
हो, तपाईं र म संग उनको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा को बारे मा थाहा छ लिओनेल मेस्सी - को रूपमा जो फुटबल मा GOAT छ। प्रशंसकको बावजुद, केवल केही प्रशंसकहरूले उनको क्रिस्टियानो रोनाल्डोको जीवन कहानीको संक्षिप्त संस्करण पढेका छन्। हामीसँग यो सबै तपाईंको लागि तयार छ। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उनको मनपर्ने उपनाम 'GOAT' रहन्छ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सान्टोस अभेइरोको जन्म फेब्रुअरी १ ​​5। Day मा उनको आमा मारिया डोलोरेस डोस सान्टोस अभेरियो र स्वर्गीय पिता, जोसे दिनिस अवेरोमा भएको थियो।
उनको जन्म पछि, उनको बुबाले उनको नाम रोनाल्डो राख्नुभयो - पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको प्रशंसाको लागि, जसले भर्खरै अमेरिकाको दोस्रो कार्यकालको लागि शपथ लिएका थिए। साथै, रोनीको जन्म स्थान फन्डाल हो, माडेइरा टापुहरूमा अवस्थित। यदि तपाईंलाई थाहा थिएन भने, यो पोर्चुगलको मुख्य भूमि होईन तर एक टापुले देशले दावी गरेको छ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो आफ्ना आमा बुबा, मारिया डोलोरेस (एक कुक) र जोसे दिनिस अभेइरो (एक पूर्व सैनिक, माली, र किट मानिस) बीच मिलनबाट जन्मेका तीन बच्चाहरूको अन्तिम बच्चा हुन्। हेर, उहाँकी आमा र बुबासँगै क्याथोलिक चर्च फर्किए पछि फुटबल फुटबलको तस्बिरको प्रारम्भिक फोटोमध्ये एक - सान्तो एन्टोनियोको फंचल सिभिल पेरिश।
उसको परिवारको बच्चाको रूपमा हुर्कदै:
रोनी आफ्नो जेठो भाई, ह्युगो र दुई ठूला दिदीहरू, एल्मा र कटियासँग हुर्केका थिए। उनको परिवारको अन्तिम-जन्मेको बच्चाको रूपमा, मिडियासँग यो छ कि आमा र बुबाले उनलाई धेरै प्याडमेड गर्नुभयो।
त्यतिखेर, क्रिस्टियानो स्कट-फ्रीबाट बाहिर निस्किए जब उनी घरमा अपराध गरे। उसले आफ्नो काममा लाग्नुको सट्टा उसले आफ्ना बाबुआमाको अगाडि रुन्छ। त्यस पछि उनका ठूला भाई / बहिनीहरू (ह्युगो, एल्मा र कटिया) ले उसको कुकर्मको लागि दोषारोपण गरे।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोका भाइबहिनीहरूलाई भेट्नुहोस्: उनको भाइ ह्युगो (मिडिल) हुनुहुन्छ। बहिनीहरू - एल्मा (बाँया) र Katia (दायाँ)।
आफ्ना एल्डरहरू जस्तो नभई बच्चा र बिग्रेको कारणले उनलाई दबाब हटायो। ह्युगो, Emla, र Katia आफ्नो आमाबाबुको अपेक्षा पूरा गर्नु थियो। सानो छँदा रोनाल्डोले आफ्नै तरिकाले सफलता हासिल गर्न भाग खडा गरे। उनले आफ्नो जेठो भाई ह्युगो भन्दा जीवनमा एउटा अनौंठो मौका पाए।
तपाईलाई यो जान्न चासो लाग्न सक्छ कि क्रिस्टियानोले कहिल्यै लुगा खोलेन। सुरुबाट, मारिया डोलोरेस डोस सान्तोस र उनको लोग्ने जोसे दिनिसले यो कुरा सुनिश्चित गरे कि उनी भय and्कर संग्रहका लुगा लगाउँछन्। तिनीहरू यसलाई गरीब घरबाट आएका हुन् भन्ने तथ्यलाई छायामा प्रयोग गर्छन्।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो परिवार पृष्ठभूमि:
सबैलाई थाहा छ स्वयं घोषित GOAT फुटबल पहिलो अरबपति हो। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, CR7 नम्र शुरुआतबाट आउँदछ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोको परिवार धनी थिएन र उसले बाल्यावस्थामा अत्यन्तै गरीवीको सामना गर्यो।
ऊ हुर्केको घरले त्यस समयमा उसको परिवारले सामना गरेको गरिबी झल्कायो। यसले नम्रताको पाठको रूपमा काम गर्छ जुन उसले कहिल्यै बिर्सदैन। क्रिस्टियानो एक गरीव भएको घरमा हुर्कियो र उसले आफ्ना सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीसँग कोठा साझा गर्‍यो।
उसको परिवारमा चरम गरिबीको कारण, उनकी आमाले एक पटक मिडियालाई भनिन् कि उनी रोनाल्डोको गर्भवती हुँदा गर्भपतन गर्न चाहन्थिन्। यस निर्णयको एक अंश उनको श्रीमानको रक्सीको समस्याले आएको हो। साथै, धेरै बच्चाहरु हुने डर।
अस्पताल गए पछि, डाक्टरहरूले गर्भपात गर्न अस्वीकार गरे। जब मारिया डोलोरेसको अनुरोध अस्वीकृत भयो, उनी AWOL गई। CR7 को आमाले न्यानो बियर पिउन थाल्यो। उनी पनि साहसपूर्वक दौडिन, आफ्नो छोराको पेटमा मर्छ भनेर। धन्यबाद, त्यो भएन। क्रिस्टियानो जन्म भएको हल र हार्दिक थियो।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो परिवार मूल:
कुनै श doubt्का बिना, सबैले सोच्छन् कि CR7 पोर्तुगल वा यसको एउटा टापुबाट आएको हो। यो सत्य होइन। क्रिस्टियानोको वंशावलीमा भएको लाइफबॉगरको अनुसन्धानले तथ्य तथ्य पत्ता लगायो कि उसको वंश वा परिवारको जरा प्रियामा पत्ता लागेको छ। यो केप वर्डेको राजधानी र सब भन्दा ठूलो शहर हो - यो पश्चिमी अफ्रिकामा टापु हो। निहित द्वारा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पश्चिम अफ्रिकाबाट आएका हुन्।
के तपाईंलाई थाहा छ ... इजाबेल रोजा दा पिडाडेको परिवार - हम्बर्टो सिरिलो अभेरोकी आमा - जो क्रिस्टियानो रोनाल्डोका बुवाको बुबा हुन् - केप वर्डेको राजधानी प्रियाबाट आएका हुन्।
१ 16 वर्षको उमेरमा उनको परिवारले आफ्नो जन्मजात प्रियालाई अर्को अटलान्टिक टापुमा बाँच्नका लागि छोडे जसलाई 'माडेइरा' भनिन्छ। यहीं उनका तीन पुस्ता जन्मिएका थिए। हेर, उनको सन्तान मध्ये एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, फुटबलको GOAT। यसको मतलब यो कथा पश्चिम अफ्रिकाबाट आफ्नो जरा रहेको छ।
क्रिश्चियनो रोनाल्डो फुटबल कथा:
जब रोनाल्डो स्कूली शिक्षाको उमेरको थिए, उनी भर्ना भए Escola BásicaeSecundária Gonçalves Zarco, जहाँ उनले आफ्नो प्राथमिक शिक्षा शुरू गरे। कनिष्ठ हुँदा रोनी अध्ययन गर्न चाहेनन्। उनी आफ्नो बुबासँग फंचलको अन्डोरीन्हा फुटबल क्लबमा जाने बारे बढी चिन्तित थिए। यो ठाउँ होशे दीनिस अभेरोले किट म्यानको रूपमा दोस्रो काम लियो।
स्कूलको लागि रोनाल्डोको घृणा एकदमै तीव्र हुँदै गयो किनभने उहाँ हुर्कनुभयो। उसले आफ्नो होमवर्क कहिले गर्दैन, तर फुटबलको लागि आफ्नो द्रुत-बढ्दो जोशमा लिप्त हो। आठ वर्षको उमेरमा, उनले Andorinha फुटबल एकेडेमीको लागि हस्ताक्षर गरे।
उहाँमाथि निगरानी राख्न उनका बुबा (जोसे दिनिस अभेरो) ले एकेडेमीमा किट म्यानको रूपमा पूर्ण-समय काम गर्ने निर्णय गरे। आफ्नो छोरालाई एक ठोस क्यारियरको जग बसाल्न सहयोग गर्नु जोसे अवीरोको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो।
रोनाल्डोको बाल्यकालका टीमका साथी रिकार्डो सान्तोस, (अहिले एन्डोरिन्हाका प्रशिक्षक) उनी अन्डोरिन्हा एफसीमा हुँदा अत्यधिक महत्वाकांक्षी र भावनात्मक नाजुक भएको कुरा सम्झन्छन्। रिकार्डोका अनुसार;
"सी रोनाल्डो साँच्चै जीतको रमाईलो। जब त्यो हुँदैन, रोनाल्डो क्र्या हुन्छ। ऊ निकै क्रुद्ध भयो कि उसले निकको नाम 'क्रयबाबी' पायो। "
युवा स्तर माथि बढ्दै:
CF Andorinha संग दुई वर्ष बिताए पछि, CR7 Nacional, माडेरा टापु मा अर्को एकेडेमी संग एक परीक्षण को लागी भयो। त्यहाँ खेल्दा, मानिसहरूले अवलोकन गरे कि उहाँसँग विशेष प्रतिभा थियो।
यो उनीहरुका लागि जितेका ट्रफी र सम्मानमा प्रस्ट देखिन्थ्यो। हेर, जवान केटाको चित्र हो जुन उसले आफ्ना बाबुआमा, क्लबका स्टाफ र केही परिवारका सदस्यहरूसँग टूर्नामेन्ट जीतको उत्सव मनाउँछ। त्यस समयमा कसैलाई पनि थाहा थिएन कि उनी ग्रहको महान फुटबलर बन्नेछन।
लिस्बनका लागि अभिभावक र परिवारका सदस्यहरू छोड्दै:
आफ्नो फुटबल खेल्ने कला सुधार गर्ने र आफ्ना आमाबाबुलाई गरीबीबाट बचाउने प्रयासमा क्रिस्टियानोले आफ्नो युवावस्थाको सबैभन्दा ठूलो निर्णय गरे। उनले १२ वर्षको उमेरमा माडेइरामा लिस्बनको लागि परिवार छोडे।
त्यो वर्ष १ 1997 1,500,, रोनी स्पोर्टि CP सीपीसँग तीन दिनको परीक्षणमा गएको थियो जसले उनलाई १,XNUMX०० डलरको शुल्कमा हस्ताक्षर गर्‍यो - उनले तिनीहरूको परीक्षण पार गरेपछि।
उहाँ आफ्ना बुबाआमा र परिवारका सदस्यहरूलाई छोडेर जानु कुनै सजिलो निर्णय थिएन किनकि उहाँ हरेक दिन रुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा, रोनाल्डो आफ्नो बाल्यावस्थाको उपनाम "क्राइ बेबी" सम्म बाँच्न यो दोस्रो पटक थियो। एकाकीपनको बावजुद उनले लगनशील भई लागिरहनुभयो र कडा परिश्रम गरिरहनुभयो।
उच्च र Ausing स्कूल बाट ड्रप को लागी:
१ age वर्षको उमेरमा, रोनाल्डोसँग फुटबल बलको साथ अतिरिक्त-साधारण गर्नमा आफैलाई धक्का दिने पागल मानसिकता हुन थाले। परिवारबाट टाढा हुने एक्लोपनामाथि विजय हासिल गर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने नाममा सबैले यो काम गरेका थिए।
समय बित्दै जाँदा उसले शिक्षालाई फुटबलमा मिसाउने विचारलाई मन नपराउन थाले। खेलमा पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने उनको खोजीमा, रोनले आफ्नी आमालाई स्कूली शिक्षा बन्द गर्न सल्लाह दिए। यद्यपि उसको कक्षाको विद्यार्थीहरु बीच लोकप्रिय छ, गरीब रोनी आफ्ना शिक्षकहरु संग कहिल्यै राम्रो समय थिएन।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्कूल निष्कासन कहानी:
के तपाईंलाई थाहा छ?… एक पटक उसको शिक्षकको कुर्सी फ्याँके पछि उनीहरुलाई निष्कासन गरियो, जसले दावी गरे कि उनको "अनादर" गरिएको छ।
स्कूलबाट निकालिएपछि रोनाल्डोले आफ्नो शिक्षकलाई गलत प्रमाणित गर्ने वाचा गरे। उनले खाने र बस्ने फुटबलको बहिष्कार भएको पीडामा प्रतिक्रिया देखाए। त्यो समयमा, उनले आफ्नो वेग र निर्माणमा काम गरे। यद्यपि अत्यधिक गति प्राप्त गर्नु उसको टेन्डर उमेरका लागि धेरै ठानिन्थ्यो।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो हार्ट समस्या:
एक बच्चाको रूपमा अत्यधिक गति भएकोले आफ्नो तनावग्रस्त शरीरलाई चिन्ता सहित कडा भावनात्मक प्रतिक्रिया दिइयो। यसले क्रिस्टियानोलाई रेसि heart मुटुको रोग लाग्यो। यो एक स्वास्थ्य जटिलता हो कि उसलाई फुटबल त्याग्न बाध्य तुल्यायो।
उनको असफल हृदयको जवाफमा, स्पोर्टि CP सीपी मेडिकल स्टाफले क्रिस्टियानो रोनाल्डोका आमा बुबाबाट सर्जरी गराउन स्वीकृति मागे।
उसको परिवारका सदस्यहरूको खुसीको लागि, लेजर उसको कार्डियक मार्गहरू बढाउन प्रयोग गरियो। यसले उसको मुटुमा रक्त संचार सामान्य बनायो। धन्यबाद, डाक्टरले उनलाई अस्पतालबाट खाली गरे पछि फुटबल जारी छ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो बायोग्राफी - फेम कहानीको लागि रोड:
१ 16 बर्षमा, CR7 ले आफैलाई रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो - निरन्तर कडा प्रशिक्षणको कारण धेरै महत्वाकांक्षी बन्नुभयो। कुनै समयमा, स्पोर्टि'sको पहिलो टीमको म्यानेजर लास्ला बलानीले उनलाई वरिष्ठ टीमका लागि प्री-सिजन अवसर प्रदान गरे। यो उसको ड्राईबलिंगबाट प्रभावित भए पछि यो भयो।
२०० 2003 मा, अगस्तको १२ औं दिनमा ठीकै, रोनीले भाग्य भेट्ने मौका पाए। त्यो दिन स्पोर्टि Lis लिस्बन र म्यान्चेस्टर युनाइटेडको प्री सिजन फ्रेंडली खेल थियो र लुस्ली बेलानीले रोनाल्डोलाई छान्नुभयो। के तपाईंलाई थाहा थियो?… उहाँको प्रतिस्पर्धाले स्पोर्टि Unitedलाई युनाइटेड 12-१ ले हरायो।
खेल पछि, संयुक्त का खेलाडीहरू विशेष गरी पैट्रिस इभरा र रियो फर्डिनान्ड आग्रह गरे सर एलेक्स फर्गुसन नौजवानलाई हस्ताक्षर गर्न। सत्य बोल्न, पूर्व युनाइटेड बॉस रोनाल्डोको ड्राईबलिंग र शक्तिशाली शटको ठूलो प्रतिभा मा प्रभावित भए। यहाँ म्याचको हाइलाइट छ कि उसको भाग्य परिवर्तन भयो।
अन्ततः क्रिस्टियानो युनाइटेडमा शुल्क लिए (१२.२12.24 मिलियन डलर) खर्च भयो जसले उनलाई अंग्रेजी फुटबल इतिहासको सबैभन्दा महँगो किशोर बनायो।
युनाइटेडमा सामेल भएपछि उनले नम्बर २ j जर्सीको लागि अनुरोध गरे जुन उनी स्पोर्टि atमा लगाउँथे। भाग्यवस, यसको सट्टा रोनीले number नम्बरको शर्ट प्राप्त गर्यो। जर्ज सर्वश्रेष्ठ, जस्तै संयुक्त ग्रेट्स एरिक कोन्टाना र डेविड बेखम पहिले जर्सी नम्बर लगाएको थियो। Shirt शर्ट लगाउनु पोर्तुगालीहरूको लागि प्रेरणाको अतिरिक्त स्रोत भयो।
क्रिश्चियनो रोनाल्डो बायो- सफलता कहानी:
युनाइटेडमा, रोनीले आफ्नो अद्भुत फार्म मात्र कायम गरेन तर आफ्नो सीपमा सुधार गरे र उनी विश्वको सर्वश्रेष्ठ फुटबलर हुन सक्छन भनेर प्रमाणित गर्न थाले।
२०० F फिफा वर्ल्ड कप पछी, उनी क्लबको साथमा भएको घटनामा सामेल भए वेन रोनी पठाइयो त्यस कारणले, रोनाल्डोले २००––० season को मौसममा बढावा प्राप्त गर्‍यो।
अ English्ग्रेजी र केही युनाइटेड प्रशंसकहरूलाई मौन पार्ने तरिकाको रूपमा, CR7 ले गोल गर्ने गोल गर्यो। कुनै पनि समय मा, उनले पहिलो पटक २० गोलको अवरोध तोडिदिए र पहिलो प्रीमियर लिग उपाधि जिते। धेरै सामूहिक र व्यक्तिगत सफलता पछाडि उहाँको पहिलो फिफा ब्यालन डी ओर पछ्याईयो।
२०० – -१० सिजन अगाडि, सीआर Real रियल मैड्रिडमा विश्व रेकर्ड स्थानान्तरण शुल्कका लागि सामेल भए - billion million मिलियन (€ million मिलियन) १ अर्ब डलरको खरीद-आउट धाराको साथ। लस ब्ल्यान्कोसमा, उनी आफ्नो ब्यालोन डिसो जितेको फार्ममा फर्किए जुन उनले लगातार जित्यो।
Troph451 पटक oring 438 खेलमा ट्राफी र सम्मानहरूको साथ गोल गर्दै रोनीलाई एउटा आत्म प्रशंसित फुटबल गोटमा परिणत गर्‍यो।
लस ब्लान्कोसका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेजसँगको नतिजापछि क्रिस्टियानोले महसुस गरे कि उनी अब अपरिहार्य छैनन्। यसले उनलाई रियल म्याड्रिडका साथ आफ्नो दिनहरू नम्बर बनायो।
Massimiliano Allegri आफ्नो भाग्य कोशिस गरी र जुocking्गन्टस लाईजेन्डसमा हस्ताक्षर गरेर आश्चर्यजनक रुपमा ज्याकपट जित्यो। जुभमा, क्रिस्टियानोले राष्ट्रिय र क्लब गोल स्कोरिंग रेकर्ड तोड्न शुरू गरे। आफ्नो सम्मान एकतामा पुर्‍याउन उनले पोर्तुगललाई बढी राष्ट्रिय ट्राफियां र सम्मेलनमा उनको क्याबिनेटमा नेतृत्व गरे।
यस बायोलाई राख्ने समयमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब विश्वको शीर्ष सात खेलकुद ग्रेटहरूमा एक हुन्। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रेम जीवन:
फुटबल खेल्ने स्टारडममा उत्रिएदेखि पोर्तुगालीहरू उनको मुटुको मामिलामा तुलनात्मक रूपमा गोप्य रहेको छ। Lifebogger क्रिस्टियानो रोनाल्डो सम्बन्ध इतिहास तीन दृष्टिकोणबाट हेर्छ। पहिले उसको पुष्टि गरिएको मितिहरू, दोस्रो मुठभेडहरू हुन्, र तेस्रो सीआर's को हूकअपहरूको सूची हो।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको P१ भूतपूर्व गर्लफ्रेंडहरू:
सार्वजनिक रूपमा, उहाँसँग पुष्टि भएका सम्बन्धहरूमा, (१) जोर्डाना जार्डल (२०० 1 - २००)), (२) मार्चे रोमेरो (२०० 2003 - २००)), ()) गेम्मा एटकिन्सन (२०० 2004), ()) नेरेडा गलार्डो (२०० 2) र ()) इरिना शाक (२०१० - २०१ 2005)
क्रिस्टियानो रोनाल्डो डेटिoun भेटहरू:
अफवाह यो छ कि रोनले निम्नलिखित महिलाहरुलाई मिति दिइयो; ()) मिया जुदाकन (२००)), ()) बिपाशा बसु (२०० 7), ()) राफेल फिको (२००)), (१०) पेरिस हिल्टन (२००)) र (११) ओलिभिया सौन्डर्स (२००))।
सीआर dating डेटि encoun मुठभेडाहरूको दोस्रो ब्याच समावेश गर्दछ; (१२) किम Kardashian पश्चिम (२०१०), (१)) एन्ड्रेस उरच (२०१)), (१)) एलेशिया रियाबेंकोवा (२०१)) (१)) डानिएला चाभेज (२०१ 2010), (१)) जोर्डाना जार्डेल (२०० 13 - २००)) र (१)) एलेसिया टेडेसी (२०१)) ।
सीआर dating डेटि encoun एन्काउन्टरहरूको तेस्रो ब्याचले समावेश गर्दछ: (१ 7) माजा डार्विंग (२०१,), (१)) एलेसांड्रा एम्ब्रोसियो (२०१ 18), (२०) डानियलला ग्रेस (२०१ 2015), (२१) पाउला सुआरेज (२०१ 19), (२२) क्रिस्टिना बुचिनो २०१)) र (२)) कासेन्ड्रे डेभिस (२०१ 2015)।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो हूक अप्स:
हामीलाई थाहा छ स्टपओभरको सुल्तानलाई निम्न महिलाहरूसँग अस्थायी मामिलाहरू हुन; (२ 24) रीटा परेरा (२०१२), (२)) एलिसा डी पानिसिस (२०१२), (२)) अमल साबेर (२०१ 2012), (२)) डायना मोरालेस (२०१ 25), (२)) मेलानी मार्टिन (२०१ 2012), (२)) लुसिया भिल्लान (२०१ 26), ()०) नेटाली रिन्कोन (२०१ 2014), ()१) निकोलेटा लोजोनोवा (२०१ 27) र ()२) डिजाइरी कोर्डो (२०१ 2014)।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्तमान प्रेमिका:
उनी जर्जिना रोड्रिग्ज हुन्। क्रिस्टियानो रोनाल्डोकी प्रेमिका म्याड्रिडबाट 450० किलोमिटर टाढा फ्रान्सेली सिमाना नजिक अवस्थित स्पेनको जाका उत्तरपूर्वी शहरकी छिन्। उनले ब्रिस्टल, इ England्ल्याण्डमा एक परिवार संग बस्नु भन्दा पहिले उनको गृहनगरमा वेटर्रेसको रूपमा जीवन शुरू गर्‍यो।
जर्जिना रोड्रिग्जले क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई कसरी भेटे?
एएस स्पोर्ट्स न्युजका अनुसार उनले जुव स्टारलाई म्याड्रिडको गुच्ची स्टोरमा भेटे, कुनै समयमा उनी पसल सहायकको रूपमा कार्यरत थिए। उनको पहिलो पटकको बारेमा कुरा गर्दा, जर्जियाले एक पटक वर्णन गरे;
"उसको शरीर, उचाई र मेरो ध्यान पक्राउछ। तुरुन्तै, म उनको अग्रभाग मा डरलाग्दो थियो र अमेरिका मा एक स्पार्क IGNITED।
म धेरै लज्जित छु र यसका तारिफ मँ अधिक उनको हिब्रूको अगाडि, एक झलकको साथ, मलाई छुनु भयो।
त्यसपश्चात्, मार्गले मलाई उपचार गर्छ, मेरो ख्याल राख्छ र मलाई आराम गर्यो। "
क्रिस्टियानो रोनाल्डोका बच्चाहरू:
माडेइरा मूल निवासी २ of वर्षको उमेरमा बुबा बन्न पुगे जब उनका पहिलो बच्चा क्रिस्टियानो जुन जुन २०१० को १ 25 औं दिनमा जन्मेका थिए। सीआर never ले कहिल्यै पनि क्रिस्टियानो जुनको जैविक आमाको परिचय सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेन, जसलाई उनले आफ्नो गोप्यतादेखि गोप्य राखेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका मा जन्म।
क्रिस्टियानो जूनियर आफ्नो बुबाको जीवनको प्रमुख व्यक्तित्व हुन् र उनी प्रायः अवार्ड समारोहहरूमा उनको पक्षमा देखा पर्दछन्। उसको बुबाले जस्तै उनी पनि एक महान फुटबलर बन्ने सपना देख्छन्।
पोर्चुगल कप्तानका जुम्ल्याहा बच्चा, केटा र केटी - मातेओ र ईभा पनि छन्। दुबै बच्चाहरु एक सर्ोगेट आमाको सहयोगमा आए - २०१ 2017 को गर्मीमा।
जुम्ल्याहा बच्चाहरूको जन्म पछि, त्यहाँ एक पटक गनगन भयो कि रोनाल्डो आफ्नो परिवार मा चौथो थप स्वागत गर्न सेट छ। यो प्रेमिका जर्जिना रोड्रिग्जसँग उनको पहिलो बच्चा भयो। उनले एउटी केटीलाई जन्म दिए जसलाई उनीहरू अलाना मार्टिना भन्छन्।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीवनशैली:
त्यसोभए रोनीले आफ्नो पैसा के खर्च गर्छ? रोनाल्डोको सबैभन्दा ठूलो शौक भनेको कार र घरहरू प्राप्त गर्नु हो। उसले आफ्नो मासेरातीसँगै $ 300,000 (२०207,000,०००) लेम्बोर्गिनी अभेन्टोर ड्राइभ गर्दछ। क्रिस्टियानोको पनि बेन्टली, पोर्श, एक मर्सिडीजको स्वामित्व छ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको घर:
जसै हामी उसको बायो लेख्छौं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक विलम्बित विला डेभलपर ओटेरो ग्रुपले निर्माण गरेको सस्तोमा $ १1.6 लाखको हवेलीमा बस्दछन्। तपाईं पैसा एक फूटबलर को लागी सानो फिगर जस्तो लाग्न सक्छ जो फोर्ब्स मा नियमित रूपमा चित्रित छ।
यो पनि ध्यान दिनुहोस्, छुट्टी घर उसको स्वामित्वमा रहेको million 47 मिलियनको सम्पत्ति पोर्टफोलियोको सानो हिस्सा मात्र हो। यसमा टुरिनको एउटा घर, न्यु योर्क शहरको ट्रम्प टावरमा एउटा अपार्टमेन्ट, र स्पेनको ला फिन्कामा एउटा प्याड समावेश छ। सबै सीआर's का घरहरू मध्ये, उसले माथिको एउटामाथि आफ्नो आँखा राख्छ।
तपाईंले फुटबलले उनलाई इटाली लैजानुभयो, रोनाल्डोको छुट्टीको हृदय इबेरियन प्रायद्वीपमा प्रस्टै छ। त्यस कारणले गर्दा, उनले आफ्नो परिवारको छुट्टीमा स्पेनिश तटवर्तीमा होस्ट गर्नको लागि नयाँ प्याड सेट किन्नुभयो।
उसको व्यक्तित्व वर्णन गर्न हामीले बीबीसी रिपोर्टलाई ब्याकड्रप गरेका छौं। प्रसारण कम्पनी एक चोटि प्रकट भयो किन ठूलो प्रतिद्वन्द्वी रोनाल्डो र मेस्सी बढी मिल्दोजुल्दो छन् हामी सोच्न भन्दा। यस जमानामा, हामीले CR7 व्यक्तित्वको बारेमा दुईवटा चीजहरू चुन्यौं।
पहिलो, गोल मेसिन सधैंको लागि आफ्नो नम्र पृष्ठभूमिमा गर्व गर्दछ। दोस्रो, उहाँ आत्म-विश्वासले पूर्ण हुनुहुन्छ। भित्रको रूपमा, रोनीलाई थाहा छ कि उनीसँग महानताको भाग्य छ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो पारिवारिक जीवन:
रमाईले आफ्नो परिवारको प्रत्येक सदस्यलाई प्रख्यात हुनदेखि लिएर आएको सबैभन्दा अनमोल उपहार भनेको एकताको अनुभूति हो। यसले प्रेमको अटुट वेब बनाएको छ। यहाँ हामी तपाईलाई उनको बुबाआमा र परिवारका अन्य सदस्यहरुको बारेमा बढी बताउनेछौं।
क्रिश्चियनो रोनाल्डोको बुबाको बारेमा:
जोसे दीनिस अवीरोको जन्म सेप्टेम्बर १ 30 .1953 को mother० औं दिनमा उनको आमा फिलोमिना अवेरोमा भएको थियो। एक जना किटम्यान र माली भए पनि, क्रिस्टियानो रोनाल्डोका बुबा एक समय सिपाही थिए जसले पोर्तुगलको लागि लोकप्रिय युद्ध लडेका थिए।
सेनामा छँदा जोसे दिनिस अभेरोले पोर्चुगललाई अंगोलाको स्वतन्त्रता जोगाउन रोक्न सहयोग पुर्‍यायो। दुःखको कुरा, तिनी र उनका मान्छेहरू युद्ध हराए, जसमा उनले सँगी विपक्षी सिपाहीहरूलाई अत्याचार गरेको देखे। युद्धले उनलाई मानसिक दाग छायो र यसरी होशे दीनिस एक दीर्घकालीन मादक पदार्थ बने।
रोनाल्डो रक्सी पिउँदैनन् र यसको मुख्य कारण भनेको उसको बुवा हो। É सेप्टेम्बर २०० on मा आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा अघि जोसे दिनिस अभेरो अप्रत्याशित मादक थिए। उनको कलेजो विफलताको कारण मृत्यु भयो, जब रोनाल्डो ओल्ड ट्र्याफर्डमा आफ्नो क्यारियरको दुई वर्ष मात्र थिए। अत्यधिक मद्यपानको कारण उत्पन्न समस्याहरूको परिणामस्वरूप होसे दीनिस अवीरोको मृत्यु भयो।
क्रिश्चियनो रोनाल्डोको आमाको बारेमा:
मारिया डोलोरेस डोस सान्तोस अवेरोको जन्म December१ डिसेम्बर १ 31 .1954 मा उनकी आमा माटिल्ड डोस सान्टोस दा भिभीरोस र बुबा, जोसे भिभेरोस (सफा गर्ने) मा भएको थियो। रोनाल्डोकी आमा पेशाले पकाउँछिन्।
२०० 2005 मा जोसे दिनिस अवीरोको मृत्यु पछि मारियाले पुनःविवाह गरेकी थिइनन्। एक रिपोर्टका अनुसार उनले जोस एन्ड्राड नाम गरेका मानिसलाई डेटि। गर्न थालिन्। मारिया डोलोरेसको प्रेमीलाई भेट्नुहोस् जो क्रिस्टियानो रोनाल्डोको स्टेपेडाड हुन सक्छ।
आज, मारिया विलासी जीवन बिताउँछन्। उनी आफ्नो रोटी-विजेता छोरा र नातिनातिनाहरूसित समय बिताउन रमाउँछिन्। CR7 को आमाको सोशल मीडियामा फ्यान आधार छ - १.1.7 लाख भन्दा बढी इन्स्टाग्राम अनुयायीहरू - २०२० तथ्या .्क।
उनको परिवारको लागि, दु: खको क्षण एकपटक आयो जब २००ia मा मारिया डोलोरेस डोस सन्तोसलाई स्तन क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। भाग्यवस, विकिरण उपचारका धेरै चक्रहरू पछि उनी पूर्ण रूपले निको भइन्। अहिलेसम्म, उनले क्यान्सर-क्यान्सर औषधीहरू खालिमा राख्न रोग लिन्छिन्।
२०१ 2015 मा, स्पेनका अधिकारीहरूले उनीमाथि पैसा सापेको आरोप लगाए। उनीहरु म्याड्रिडको 'बाराजास' एयरपोर्टमा रोके - उनको bag€,००० डलर बोक्ने बोरामा लिएर। मारियाले घोषणा पत्र भर्न असफल भएको थियो र उनको पैसा स्पेनी अधिकारीहरूले जफत गर्यो।
क्रिश्चियनो रोनाल्डोको भाईको बारेमा:
१ dos Sant Sant मा जन्म भएको ह्यूगो डोस सान्तोस अभेरो १० वर्षको सीआर's बर्षे वरिष्ठ छन्। हालसालैका वर्षहरूमा, जीवन उहाँकै लागि चुनौतीपूर्ण भएको थियो - धेरै जसो आफ्नो सुपरस्टार भाईको छायामा बस्न मान्ने एक मानिस।
पछिल्ला दिनहरूमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डोको भाइ एक समयका आशाजनक फुटबलर थिए। दुःखको कुरा, उनी १ 1990 XNUMX ० को दशकको अन्तमा मादक पदार्थ र मदिरा सेवनको जीवनमा डुबे। तपाईंले अनुमान गर्नुभए जस्तो, त्यो पिउने पार्ट अभेरो परिवारमा दौडिएको एक लत जीन थियो।
रोनीको सहयोगका लागि धन्यवाद, ह्युगो, अब सकुशल भयो क्रिस्टियानोको प्रेम र समर्थनबाट आशिष्। जब म क्रिस्टियानो रोनाल्डोको बायो लेख्छु, ह्युगो पोर्चुगलको माडेइरामा सीआर's को संग्रहालयको प्रबन्धक हुन्।
कटिया अभेरियोको बारेमा:
अक्टोबर १51976 को ffh दिनमा जन्मेकी (नौ वर्ष उनको जेष्ठ) उनी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको तत्कालकी जेठी बहिनी हुन्। Katia Aveiro एक पोर्तुगाली गायक हो एक सफल क्यारियर संग उनको भाइको लोकप्रियता को धन्यवाद।
सबै रोनाल्डोका बहिनीहरूमध्ये उनी उनीसँग सब भन्दा नजिक छिन्। Kieta आफ्नो भाइको रक्षा गर्न पर्याप्त समय लिन्छ जब उसलाई प्रशंसकहरूले घिस्याउँछन्। उनी अधिकतर एन्टी-मेस्सी फ्यानहरू वा सीआर against विरुद्ध जे पनि छन् उनीहरूमा कडा हिटछिन्। यो हामीलाई थाहा छ कटिया अभेरियोको गीतको सब भन्दा राम्रो हो।
एल्मा डोस सान्तोस अभेरोको बारेमा:
मार्च १ 10 1973 को १० औं दिनमा जन्मेकी उनी क्रिस्टियानो रोनाल्डोकी दिदीकी जेठी हुन्। परिवारको जेठो बच्चा पनि हो। कतिया भन्दा कम लोकप्रिय भए पनि, एल्मा मोडलि intoमा छिन्। उनी सिनसिनाटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका बसाउनु भन्दा पहिले पेरूको स्कूलमा गइन्।
एल्माले आफ्नो बच्चा भाईलाई 'अबसम्मको सर्वश्रेष्ठ' भनेर चिनाउँछिन्। कतिया जस्तै, उनी पनि फ्यानहरूप्रति निर्दयी छिन् जसले CR7 को ड्र्याग गरे। आजकल, उनी उनको लडाई सिधै उनको भाइको प्रतिद्वंदी लियोनेल मेस्सीमा लगिन्। एल्माले एक पटक बार्सिलोनाका ताराको भाईलाई आफ्नो भाईको पूजा गरिरहेछन्।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो हजुरबा हजुरआमा:
उनको आमाको पक्षबाट, त्यहाँ पुर्तगाली आफन्तहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी छ। क्रिस्टियानो रोनाल्डोका हजुरबा हजुरआमा (जोस भिभेरोस र मारिया-एन्जेला स्पिनोला) ले पर्थ पश्चिमी अस्ट्रेलियाको पर्जेको उपनगरीय शहरमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्यामा पोर्चुभियस बनेका छन्।
दुबै ग्रानिजले सन् २००० को आसपास फन्चाललाई (माडेइरामा) अष्ट्रेलिया छोडेका थिए - सबै बिभिन्न जीवनको खोजीको नाममा। त्यस समयमा रोनाल्डोकी आमा मारिया डोलोरेस स्पोर्टि Lis लिस्बनमा आफ्नो छोराको आरोहणको नजिकबाट निगरानी गर्न पोर्तुगलमै बस्न रोजे।
मारिया डोलोरेसको अष्ट्रेलियामा धेरै आफन्त छन्। साँच्चै, भाग्य अर्को तरिकामा पुगेको थियो, रोनाल्डो पनि अष्ट्रेलियामा सायद उनीहरूसँग सामेल हुन आएका थिए। जोस भिभिएरोस, CR7 को हजुरबुबा मारियालाई गर्व छ कि आफ्नो नातिको हेरचाह गर्दा विश्व फुटबलमा छालहरू छन्।
उसको बुवाको पक्षबाट, फिलिमोना एभिरो (तल फोटो खिचेका) क्रिस्टियानो रोनाल्डोको हजुरआमा हुन्। सीआर's का बुबा (स्वर्गीय जोसे दिनिस अवीरो) का आमा जुलाई २०१7को 8th औं दिनमा पुर्तगालको अस्पतालमा केही हप्ता भर्ना भए पछि निधन भयो। त्यहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डोका बुवाको बुवाको बारेमा कागजातको अभाव रहेको छ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोका आफन्तहरू:
जोसे दिनिस अभेरियो र मारिया डोलोरेस (एल्मा डोस सान्टोस अभेइरो) को पहिलो छोरीले एलेनोर क्यार्स नाम गरेकी हुर्के छोरी। उनी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको पहिलो राम्रो र एक सामाजिक मिडिया सनसनी पनि हो। सुन्दर एलेनोर काइर्स एल्मा र एडगर (उनको बुवा) लाई जन्मेको थियो।
क्रिस्टियानो रोनाल्डोको आफन्तको अर्को नातेदार एलिसिया बिट्रियाज अभेरियो हो - उनी जेठो दाइ हुगो डोस सान्टोस अभेरोको छोरी। एलेनोर काइर्स जस्तै उनी पनि एक इन्स्टाग्राम स्टार हुन् जसले आफ्नो परिवार र यात्राको बारेमा पोष्ट गर्न प्लेटफर्म प्रयोग गर्दछ।
तेस्रो हो, जोस दिनिस परेरा अवीरो, कटिया अवीरोको छोरा र उनको पूर्व पार्टनर जोसे परेरा। क्रिस्टियानो जुनियर जस्तै रोनाल्डोका भतिजा (जोस डिनिस परेरा अवेरो) पनि निर्माणमा एक फुटबलर हुन्। दुबै भाईहरू यहाँ एकदम नजिक देखिन्छन्।
चौथो: क्रिस्टियानो रोनाल्डोका आफन्तहरू उनका भतिजा रोड्रिगो परेरा अवीरो हो। अगस्त २००० को चौथो दिनमा जन्मिएको - उहाँ कतिया अभेरोको अर्को छोरा हुनुहुन्छ। हामी यहाँ हेर्दै राम्री हेराई रोड्रिगो परेरा अवीरो कसैको साथ देख्छौं जो आफ्नी प्रेमिका जस्तो देखिन्छ।
अन्तिम तर अन्तिम होइन ह्युगो टोमस हो जो हुगो डोस सान्तोस अभेरोको छोरो हो। होसे दीनिस परेरा अवेरो जस्तै उहाँ पनि आफ्ना चचेरो भाई क्रिस्टियानो जुनियरसँग नजिक हुनुहुन्छ। जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ, ह्युगो टोमस हरेक सेप्टेम्बरमा उनको जन्मदिन मनाउँछन्।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनटोल्ड तथ्य (गैर क्यारियर):
उसको संस्मरणको बारेमा धेरै सुने पछि हामी तपाईलाइ केहि सत्यताहरु प्रस्तुत गर्छौं जसलाई तपाईले उनीबारे थाहा नपाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो, एक गैर-पेशेवर दृष्टिकोणबाट।
तथ्य # १: शरारत:
एक पटक क्रिस्टियानो रोनाल्डोले एक पटक सडकमा घरबारविहीन व्यक्तिको लुगा लगाएर म्याड्रिडका बासिन्दाहरूलाई धोका दिए। उसको कुख्यात बल कौशलता प्रदर्शन गर्दै पनि, उनका प्रशंसकहरूले उहाँलाई बेवास्ता गरे किनभने उनी घरविहीन व्यक्तिको जस्तो देखिन्थ्यो। आज सम्म, तिनीहरू आफ्नो कार्यको लागि पश्चाताप गर्छन्। रोनाल्डोको शरारत भिडियो यहाँ चेकआउट गर्नुहोस्।
यद्यपि, जुभेन्टस स्ट्राइकरले आइसलमप्रति आफ्नो सम्मानको प्रतिज्ञा गर्दै भने कि यो विश्वमा सब भन्दा सुन्दर धर्म हो। जे होस्, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अझै पनि आफूलाई एक रोमन क्याथोलिकको रूपमा मान्दछन्। सानो छँदा, उनका आमाबुबाले उनलाई सान्तो एन्टोनियोको फchal्चाल सिविल पेरिसमा एक नयाँ बच्चा बन्न कुरा गरे।
तथ्य # १: बौद्ध संघर्ष:
एक पटक रोनाल्डोले बौद्ध धर्मको अनादर गरेकोमा ठूलो आलोचना गरे। उनीहरूले उनको जेबमा हात हालेर उभिरहेको आरोप लगाए र सबैभन्दा नराम्रो कुरा, गौतम बुद्धको मूर्तिमा उनको खुट्टा राखिदिए। सत्य यो हो कि रोनीले आफ्नो सोशल मिडियाबाट तस्वीर मेटाउन अस्वीकार गरे, र यसले उनलाई धर्मबाट धेरै प्रशंसक बनायो।
तथ्य # १: कुनै ट्याटू तथ्य छैन:
तपाईं असंख्य फुटबलरहरू पाउनुहुनेछ कम्तिमा एउटा शरीर कला भएको। रोनाल्डो केही एथलीटहरू मध्ये एक हुन् जसमा ट्याटू नभएको कारण उनले नियमित रूपमा रक्तदान गरे। भर्खरै, CR7 अस्थि मज्जा दाता भयो।
तथ्य # १: के क्रिस्टियानो रोनाल्डो समलि ?्गी हो?
वर्षौं अघि उनीहरूले दावी गरेका थिए कि पोर्चुगल अगाडि बद्र हरि नाम गरेको मोरक्कन किकबक्सरसँग समलि .्गी सम्बन्धमा थियो। उनले मोरोक्कोलाई भेट्न नियमित यात्रा गरिरहेका थिए भनेर स्पेनी समाचारपत्रमा कथाहरू उजागर भएपछि यस विचित्र रिपोर्ट प्रकाशित भयो। यहाँसम्म कि बद्र हरिसँग क्याप्शनको साथमा उसको बलात्कार गरिएको प्रेमीको फोटो थियो:
'भर्खरै बिबाहित। हाहाहा
तथ्य # १: मेयरगागा आक्रमण:
के तपाई कहिल्यै जानुभएको छ? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बलात्कार को आरोप मा indepth? वर्षौं पहिले, पोर्चुगल खेलाडीले नेभाडा निवासी अमेरिकी मेयरगागाले मुद्दा हालेका थिए। २०० claimed मा लस भेगास होटेलमा उनले उनलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको दावी गरेकी थिइनन्।
उनको अनुसार, रोनीले आपराधिक अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउन “फिक्सरहरू” को एक टोली पठायो। त्यसपछि मेयरगाले दाबी गरे कि उनले पछि उनलाई $ 375,000,००० को लागि चुप लागेर छेड़छाड गरी
सोध्दा रोनाल्डोले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरे र आफ्नो अन्तस्करणलाई सफा राखेर भने। त्यसबेला देखि, मेयरगा आफ्नो कथाको साथ अगाडि आउन बाँकी छ र भनिन् उनी ब्रान्ड रोनाल्डोको प्रभावशाली शक्तिदेखि डराउँछिन्
क्रिस्टियानो रोनाल्डो अनटोल्ड तथ्य (क्यारियर):
तथ्य # १: रोनाल्डोको तलबलाई साधारण मानिससँग तुलना गर्दै:
प्रति वर्ष: € 31,000,000
प्रति महिना: € 2,583,333
प्रति हप्ता: € 595,238
प्रति दिन: € 85,034
प्रति घण्टा: € 3,543
प्रति मिनेट: € 59
प्रति सेकेन्ड: € 0.98
हामीले सीआर7को आय रणनीतिक हिसाबले मोड्यौं। यहाँ हामी तपाईंलाई यो कुरा प्रकट गर्नेछौं कि तपाईंले आफ्नो जीवनको कथा पचाउन शुरू गरेको समयदेखि नै सोकर लेजेन्डसनले के कमायो।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो क्रिस्टियानो रोनाल्डोको बायो, यो उसले कमाएको हो।
के तपाईंलाई थाहा छ?… एक व्यक्ति जसले एक महिनामा, 4,035,०645। कमाउँछ उसले vent54 महिना (years years वर्ष) को लागि काम गर्नुपर्नेछ जुन रोभेन्टले जुभेन्टसको लागि एक महिनामा स what्कलन गर्छ।
तथ्य # १: क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कमजोरी:
तपाइँ र मलाई थाहा छ उहाँ वास्तविकतामा फिफामा पनि उत्कृष्ट खेलाडी हुनुहुन्छ। यद्यपि त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन सम्मानित आइकनको खास गुण राम्रो हुँदैन। तिनीहरूले समावेश छन्; आक्रामकता र अवरोध।
तथ्य # १: क्रिस्टियानो रोनाल्डो र अल्बर्ट फन्ट्राउ कहानी:
प्रशंसकहरू सचेत छन् कि उनले युनाइटेडमा जानु भन्दा अघि उनले स्पोर्टि at खेलेका थिए। के तपाईंलाई थाहा छ? ... त्यहाँ रोनीको पहिलो पटक स्पोर्टि Lis लिस्बनमा प्रवेश गरेको मित्रताको अविश्वसनीय कहानी छ।
एक धन्य दिन, एक स्काउट फुटबल मैदानको भ्रमणमा आयो जहाँ सीआर and र उसको नजिकका साथी अल्बर्ट फन्ट्राउ खेल्थे। खेल अघि, खिलाडीले भने;
"जसले स्पोर्टि Lis लिस्बन एकेडेमीमा बढी गोल गर्दछ म पनि समावेश गर्दछु।"
रोनाल्डोको टीमले खेल 3-० ले जित्यो। उसले आफ्नो साथी अल्बर्टले दोस्रो थप्नु अघि पहिलो गोल बनाए।
तेस्रो गोलका लागि अल्बर्ट गोलकिपरसँग एक एक गर्दै गए, बल उनको वरिपरि लिए र पछि तेस्रोको लागि रोनाल्डोलाई बल दिए। सत्य यो हो कि उसले बललाई खाली खाली जालमा ट्याप गर्न सक्थ्यो, तर उसले गरेन। जब उनले प्रश्न गरे कि किन उनले जीवनकालको अवसर प्राप्त गर्न स्कोर गरेनन्, अल्बर्ट फन्ट्राउ जवाफ दिए:
"तपाईं रोनाल्डो मभन्दा राम्रो हुनुहुन्छ"।
रोनाल्डोलाई आफ्नो गन्तव्यसँगै अगाडि बढ्न दिएर अल्बर्टले महान् बन्ने अवसर गुमाए। हालसालै एक जना पत्रकार उनलाई भेट्न आए र उनी बेरोजगार भएको पाए तर अझै सुन्दर घरमा बस्छन्। क्रिस्टियानोले मन पराउने फिर्ता पाएकोमा अल्बर्ट आफ्नो परिवारसँग विलासी जीवनशैलीको आनन्द उठाउँछन्।
तथ्य # १: संग्रहालय तथ्यहरु:
रोनाल्डोको हाल आफ्नै गाउँ माडेइरामा आफ्नै संग्रहालय छ। यो एक संग्रहालय हो कि उसको जेठो भाई, ह्युगो डोस सान्तोस अभेरो द्वारा प्रबंधित।
ग्यालरीमा उनका सबै पुरस्कार र ट्राफिहरू छन् - १ 150० भन्दा बढी संख्या - भविष्य को ट्राफीहरूको लागि थप कोठा उपलब्ध छन्, जुन उसले जित्न अपेक्षा गर्दछ।
निस्सन्देह, क्रिस्टियानो रोनाल्डोको र्‍याग्स टू रिच स्टोरी एक कहानी मात्र होइन जुन केवल एक चाँदनी मात्र रहन्छ। CR7 को जीवनीले हामीलाई हाम्रो संसारको बारेमा एउटा कुरा बुझ्न दिन्छ। त्यो तथ्य हो कि जीवनका धेरै असफलताहरू हुन्छन् जसलाई उनीहरूले जान्दैनन् कि उनीहरू कति हदसम्म सफल भए कति सफल भए।
एक गरीब परिवारबाट आएको भए पनि, क्रिस्टियानो रोनाल्डोका अभिभावकहरूले उनीहरूले पैसा किन्न नसक्ने खर्चको किन्न सक्ने देखाए। उसको शुरुवाती फुटबल क्यारियर राम्रोसँग कतै राम्रो हुने थिएन यदि उनका बुवा - होसे दीनिस अवीरो - आफ्नो छोराले खेलेको क्लबमा किट म्यानको रूपमा आफ्नो पुरानो काम छोडेका थिएनन्। उ
अर्कोतर्फ, मारिया डोलोरेस डोस सान्टोस अवीरो आफ्नो छोराको प्रगति हेर्न पोर्तुगलमै बसिरहेकी थिइन् जबकि उनको छोराका हजुरबा हजुरआमा र आफन्तहरू अष्ट्रेलियामा बसाई सरेका छन्। ह्युगो डोस सान्तोस अभेरियो उनीहरूको बुद्ध बुबाको अनुपस्थितिमा बुब व्यक्तित्व बने।
अन्तमा ठूला बहिनीहरू - कातिया अभेरियो र एल्मा डोस सान्तोस अभेरोले छोटो अवसरहरूमा आफ्ना कान्छो भाइलाई क्यारियर प्रतिद्वन्द्वीबाट बचाएर आफ्नो प्रेम देखाए। पाउनुहोस् क्याथ्रिन मेयरगाको बारेमा अधिक जान्नुहोस् - वुमन जो रोनाल्डोलाई बलात्कारको आरोप लगाउँछिन्.
CR7 को बायोमा हामीसँग यती टाढा रहनुभएकोमा धन्यवाद। कृपया टिप्पणी अनुभागमा हामीलाई सचेत गराउनुहोस् यदि तपाईं केहि यस्तो खेल गर्नुहुन्छ जुन यस लेखनमा सही देखिँदैन। तपाइँको आत्मकथा भूखको whetting जारी गर्न, हाम्रो Cristiano रोनाल्डो Wiki तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पूर्ण नामहरू: क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सान्तोस अभेरो GOIH ComM।
उपनामहरू: GOAT, सी। रोनाल्डो, CR, CR7, Cris, Ronnie, Ron र the stepsover the सुल्तान।
जन्म मिति: २ years बर्ष र months महिना पुरानो।
जन्मस्थान: अस्पताल डा। Nlilio Mendonça, फंचल, Madeira, पोर्तुगाल।
अभिभावक: जोसे दीनिस अवीरो (पिता) र मारिया डोलोरेस डोस सान्तोस अभेरो (आमा)।
बुबाको पेशा: एक पूर्व सैनिक, माली, र किट मानिस।
आमाको पेशा: एउटा कुक।
Siblings: एल्मा डोस सान्टोस अभेरो (बहिनी), कट्या अभेरो (बहिनी) र ह्युगो डोस सान्तोस अभेरो (भाई)।
परिवारमा स्थिति: अन्तिम जन्म
पारिवारिक मूल: प्रिया, केप भर्डेको राजधानी।
प्रेमिका: जर्जिना रोड्रिगिज।
फोरमर पार्टनर: इरिना शेकि
बच्चाहरु: क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर (छोरा), ईवा मारिया डॉस सान्तोस (छोरी), अलाना मार्टिना डोस सान्टोस अभेरो (छोरी) र मातेओ रोनाल्डो (छोरी)।
मातृ हजुरबा हजुरआमा जोस भिभेरोस (मातृ हजुरबुवा), माटिल्ड डोस सान्तोस दा भिभीरोस (मातृ हजुरआमा)।
पैतृक हजुरबा हजुरआमा: फिलुमेना अवेरो (पितृ हजुरआमा)
नेफ्यू: जोसे दिनिस परेरा अवेरो (कटिया अवीरोको छोरा), रोड्रिगो परेरा अवीरो (कटिया अभेरियोको छोरो) र ह्युगो टोमस (ह्युगो डोस सान्तोस अभेरोको छोरो)।
भान्जीहरू: एलेनोर कैयर्स (एल्मा डोस सान्टोस अभेरोको छोरी) र एलिसिया बिटियाटिज अभेरियो (ह्युगो डोस सान्तोस अभेरोको छोरी)।
शिक्षा: गोनाल्वेज जार्को बेसिक र माध्यमिक विद्यालय, फन्चाल, पोर्चुगल।
खुट्टा र ईन्चमा उचाई: F फिट २ इन
मीटरमा उचाई: 1.87 एम।
उत्कृष्ट वह पल को लागि सबै भन्दा राम्रो फुटबलर बनेको छ। म उसलाई माया गर्छु। उनले रियल म्याड्रिडलाई लेलागा 2016 / 2017 र EUFA चैंपियन लीग 2017 को सी च्याम्पियनको माध्यमबाट नेतृत्व गर्नेछन्। परमेश्वरले उसलाई अनुग्रह दिन जारी राख्नुहुनेछ।